तरकारीवालीले अभिनय गरेको चलचित्र ‘लम्फू’ को रिलिज मिति सार्वजनिक – YesKathmandu.com
काठमाडौँ । लगभग १ वर्षअगाडी तरकारीवाली को नामबाट देशविदेशमा भाइरल बन्न सफल भएकी गोरखाकी कुसुम श्रेष्ठले अभिनय गरेको भनेको चलचित्र ‘लम्फू’ को प्रदर्शन मिति तय भएको छ । निर्माण घोषणा भएको केहि बर्ष भएपनि छायांकनमा लामो समय लागेको यो चलचित्र आगामी २०७५ वैशाख २८ गतेबाट रिलिज हुने पक्का भएको हो।
निर्माणपक्षले चलचित्रका केहि तस्बिर पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको छ । यो चलचित्रबाट कुसुमसँगै नव-नायक कविर खड्काले समेत चलचित्र क्षेत्रमा पाइला राख्दैछन् । कविर नेपालको एकमात्र फिल्म कलेज ओस्कार इन्टरनेशनलबाट कलाकारितामा स्नातक अध्ययन गरेका विद्यार्थी हुन् । कविर र कुसुमको साथमा चलचित्रमा सलोन बस्नेत, मरिष्का पोख्रेल, चाँदनी शर्मा, सञ्जित भण्डारी, कुशाग्र भट्टराईको पनि मुख्य भूमिका छ । गोपालचन्द्र लामिछानेले निर्देशन गरेको चलचित्रले एक यूवाको जीवनमा आइपर्ने अकल्पनिय घटनालाई पर्दामा उतारेको छ ।
यो चलचित्रले समय र परिस्थितीका कारण मानिस नायक र खल-नायक दुबै बन्छ भन्ने कथालाई उठान गरेको निर्देशक लामिछानेले बताए । भूपतिको लेखन रहेको चलचित्रमा दीपक बज्राचार्यको छायांकन, हरि सिलवालको सम्पादन छ ।
One thought on “तरकारीवालीले अभिनय गरेको चलचित्र ‘लम्फू’ को रिलिज मिति सार्वजनिक”
La khushi lagyo sunda je hos. Flim po kasto baneko x.
Thanks yes Kathmandu lai naya taja samachar ka lagi
हो हामी छुट्टियौं तर सम्बन्ध बिच्छेद भएको छैन
धन खाने डिआइजी चन्द, चोट खाने सरकारी वकिल